Abavelisi bePeyinti yokuMakisha iNdlela yeThermoplastic-iNdlela yeThermoplastic yokuMakisha iPeyinti kunye neFactory
Sinokuvelisa imigangatho eyahlukeneyo yepeyinti yokumakisha kwendlela ye-thermoplastic, njengomgangatho waseTshayina (JT / T280-2004 kunye ne-GB16311-2009), umgangatho we-BS, umgangatho we-AASHTO, njl. Imixholo kunye nezinto eziluhlaza zihluke ngemigangatho eyahlukeneyo.Sinako kwakhona ukuvelisa ngokuhambelana non-standard customization abathengi '.
Ipeyinti yokumakisha yendlela ye-Thermoplastic ineresin, i-EVA, i-PE wax, izixhobo zokugcwalisa, i-glass bead, eyimeko yomgubo oqinileyo kwiqondo lokushisa eliqhelekileyo, ukuba ifudunyezwe ukuya kuma-180-200 degrees ngembiza yokuxuba ubushushu phantsi kolwakhiwo, iya kubonakala ihamba, igubungele. Imbiza ephantsi kolwakhiwo, iya kubonakala iqukuqelela, ukugquma kwepeyinti kumphezulu wendlela kuya kwenza ifilimu enzima, Inodidi olupheleleyo lomgca, ukuxhathisa okuqinileyo kunye nokunye ukugeleza, Ukufefa okubonisa amaso eglasi amancinci kumphezulu phantsi kokwakhiwa, kunesiphumo esihle sokubonisa. ebusuku, isetyenziswa ngokubanzi kuhola wendlela kunye nendlela, ngokuhambelana nendawo esetyenziswayo kunye neemfuno ezahlukeneyo zokwakha, sinokubonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zepeyinti kumthengi wethu.
Ipeyinti yeNdlela yokuMakisha yeNdlela eNgqobileyo eMthubi eThermoplastic
Ngokunyuka kwemfuno yentlalo yamaso amancinci eglasi, ukwanda kokwenziwa kweglasi .kunye nexabiso eliphantsi ngokwentelekiso kwaye hayi umgangatho osemgangathweni, sikhetha umenzi onamandla oqoqosho ngokosetyenziso lwethu olukhulu kwaye silungelelanise amaso eglasi aqhakazileyo asetyenziselwa indlela. Ukumakishwa komgca ngokwemfuno zomgangatho omiselweyo .Iinkcukacha ezintathu :amaso okufefa umphezulu wokumakishwa komgca we-thermoplastic, amaso okufefa komphezulu wophawu lobushushu obuqhelekileyo, amaso okufefa umphezulu wokumakishwa komgca wesiseko samanzi. isitokhwe esandleni yonke imihla.
I-Thermoplastic Road Marking Paint Intshayelelo: Ipeyinti ye-Thermoplastic ebonakalisa indlela yokumakisha yenziwe nge-thermoplastic petroleum resin, ii-pigments ezikumgangatho ophezulu kunye nezongezo.Ukuyisebenzisa ukuphawula umgca, ipeyinti yokumakisha kwendlela ye-thermoplastic ineenzuzo zokumisa ngokukhawuleza, ukwakhiwa okulula, ukukhanya okulungileyo kunye nobomi benkonzo ende.Isicelo: Ingasetyenziswa kwi-asphalt okanye kwindlela yekhonkrithi yokumakishwa kwexesha elide.Idatha yobuGcisa: Sinokuvelisa imigangatho eyahlukeneyo ye-thermoplastic roa...